अब किरण, बाबुराम र विप्लवसँग एकता हुन्छ: प्रचण्ड,हेर्नुहोस र आँफ्नो विचार राख्नुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
अब किरण, बाबुराम र विप्लवसँग एकता हुन्छ: प्रचण्ड,हेर्नुहोस र आँफ्नो विचार राख्नुहोस।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका का’र्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पु’र्व माओवादीका नेता’हरुबीच फेरि एकै ठाउँ बस्ने अवस्था आउने दिशा’तिर अघि बढेको ब’ताएका छन् ।
एक टेलि’भिजनलाई बुधबा’र अन्तर्वा’र्ता दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले मोहनबैद्य किरण, डा. बाबुराम भट्टराई र नेत्र विक्र’म चन्द वि’प्लव लगा’यतका नेताहरु फुटेर राम्रो नभएको भन्ने निष्कर्षमा पुगे’को आफूले पा’एको बताए ।
‘किरणजी, बाबुरामजी र विप्लवजी जहाँ -जहाँ भएपनि हामी एउटै स्कूल’का हौं,’ प्रचण्’डले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति जे बनेको छ, मला’ई लाग्छ, उहाँहरु पनि चिन्तित हुनुहुन्छ र अ’ब फेरि एकचो’टी समय आउन खोजे’को देख्छु म ।
हामीले वि’भाजित भएर गल्ती पो गर्यौं क्यारे । यसले प्राप्त उपलब्धि पनि जोखि’ममा पर्ने पो होकि भन्ने चिन्ता जति मलाई छ बिस्तारै किरण’जीलाई, बाबुराम’जीलाई र विप्लव जी लगा’यत अरु सथाीह’रुलाई बढ्दै गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यद्यपी मेरो विप्लवजीसँग कुराकानी पनि छैन । बाबुराम र किरण’जीसँग बेला बे’ला कुरा हुन्छ । त्यो कुरा’बाट मैले महसुस गर्ने सबैलाई हामी वि’भिाजित हुनु सही होइन भन्ने निष्कर्षतिर देशको परि’स्थितिले डोर्‍याइ’राखेको छ ।’
आफूले संघी’य लोकतान्त्रिक गणत’न्त्रको रक्षाका लागि पार्टीलाई झण्डै दुईतिहाईको बहु”मतको दिशा’मा पुर्‍याएको प्रचण्डले दाबी गरे । ‘माओवादी आन्दोलनपछि विभाजन भएको पार्टी’लाई शक्तिशाली क’म्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने एउटा आर्कि’टेक्चरको भूमिका खेल्ने अव’सर पाएँ भन्ने छ मलाई’ , प्र’चण्डले भने ।
मा’ओवादी पा’र्टीभित्र विभाजन आ’एपनि आफूलाई कुनै चिन्ता नलागेको प्रचण्डले बता’ए । ‘म चिन्तित भएर बरबाद भएँ भन्ने मलाई लागेकै छैन’, उनले थपे ।तत्कालीन ए’कीकृत माओ’वादीबाट बैद्य, भट्टराई र विप्लव बाहिरिएका थिए ।यो खबर पाथिभरा डेल्लीबाट लिएका हौं।
Previous सरकार!घर आउँन नै नपाउने रहेछौं,रेमिट्यान्स बेक्कार तिरेछु,अब हुण्डीतिर नै लाग्छु:गंगा सुवेदी,हेर्नुहोस!
Next यु`रिया र डिएपी म`ल आयातमा ४० क’रोड घो-टाला,के भन्नुहुन्छ तपाईं ?